पत्रकार सम्मेलनमा सामुदायिक वनका काेषाध्यक्ष अनिलकुमार राइ ।
धरान । धरान–१७ स्थित सिंहदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा अध्यक्षले घोटाला गरेको भन्दै कोषाध्यक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।
सामुदायिक वनमा अढाइ लाख भन्दा बढी रकम अध्यक्ष लक्ष्मीराम कार्की, पूर्व सचिव शोभामणी राई लगायतले मिलेमतोमा घोटाला गरेको भन्दै कोषाध्यक्ष अनिलकुमार राईले गत साउन १० गते अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय इटहरीमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । राई गत २०७५ फागुनमा भएको अधिवेशनबाट कोषाध्यक्षमा चयन भएका हुन् । २०७३ सालमा हस्तान्तरण भएको सिंहदेवी सामुदायिक वनको पहिलो कार्याकालमा लक्ष्मीराम कार्कीको अध्यक्ष रहेका थिए भने दोस्रोमा पनि उनी नै चयन भए । सामुदायिक वनको पहिलो कार्यकालकी सचिव शोभामणी राई भने दोस्रो अधिवेशनबाट उनी कार्य समितिमा बसिनन् ।
साउन १२ गते डिभिजन वन कार्यालयमा यसबारे उजुरी गरेको कोषाध्यक्ष राईले बताए । राईले शुक्रबार सिंहदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रको चौरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयदेखि सामुदायिक वनको अध्यक्ष पदमा बसेर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको बताए । उनले आफुले आ.व. २०७४/७५ को हिसाब हेर्दा नै २ लाख ५० हजार भन्दा बढी घोटाला गरेको भेटेको भन्दै यस अघि पनि धेरै घोटाला भएको हुनसक्ने दाबी गरे । आ.व. २०७४/०७५ को अडिट गरिसकेको बिलमा घोटाला गरेको देखिएको छ । ५ सयको मबिल लगाएको बिलमा अगाडी ६ थपेर ६ हजार ५ सय बनाइएको बिल पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष राईले देखाए । कोषाध्यक्ष राईका अनुसार अडिट रिपोर्टमा काठ विक्रीको हिसाब ४ लाख ४० हजार ६०५ हुनेपर्नेमा ४ लाख २३ हजार ८४५ मात्र देखाइएको र आव २०७४/७५ को खर्च २ लाख ९२ हजार २३२ हुनेपर्नेमा ३ लाख २ सय ३२ देखाइएको छ ।
कोषाध्यक्ष राईले अध्यक्षका मान्छेहरु २०/२५ जनाको संख्यामा आएर मान्युट खोसेर लगेको भन्दै अख्तियारलाई चाडो छानविन गर्न अनुरोध गरे । उनले आफुले राखेका प्रमाणहरु लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न नसक्ने भन्दै कुनै पनि बेला अध्यक्षका मान्छेहरु आएर कब्जा गर्नसक्ने बताए । उनले समितिका बैठकमा आम भेला राख्ने निर्णय गरी आज (शुक्रबार) भेला राखेको भएपनि अध्यक्ष लगायतका मान्छेले आम भेलामा नजान भन्दै उपभोक्ताहरुलाई भड्काएको समेत बताए ।
सामुदायिक वनको नाममा अध्यक्षले एकलाख रुपैया ऋण लिएर के के काम गर्नुभयो समितिका अन्य साथीहरुलाई समेत थाहा नभएको बताए । ‘अध्यक्षले एकपटक ऋण लिए भन्नु भयो अर्काेपटक पैसा सकियो भन्नुभयो, के काममा सकियो भन्दा वनका कर्मचारीलाई बाडेर सकिएको भन्नुभयो’ –कोषाध्यक्ष राईले भने । कोषाध्यक्ष राईले सामुदायिक वनमा अगाडीदेखि नै घोटाला भए पनि यस अघि सबैले वेवास्ता गरेर बाहिर नआएको रहेछ भन्दै आफुले थाहा पाएपछि घोटाला विरुद्ध उभिएको बताए । उनले आफुले थाहा पाएसम्म कसैलाई घोटाला गर्न नदिने भन्दै घोटाला विरुद्ध अख्तियार कार्यालय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजिवी लगायत आम उपभोक्तालाई सहयोग गरिदिन अपिल समेत गरेका छन् ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष लक्ष्मीराम कार्कीले सामुदायिक वन ऋणमा चलिरहेको बताए । उनले स्थानीय बलबहादुर तामाङसँग एकलाख रुपैया ऋण लिएर चालुवर्षको कटान गरेको बताए । आफुले जानेर सामुदायिक वनमा घोटाला नगरेको तर हिसाब किताब गर्ने कुरामा कही कमजोरी भएको भए सच्याएर जान सकिने बताए ।